Firefox | My Burmese Blog
Posts Tagged: Firefox	Firefox turns5Years Old!!
On January 3, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Firefox	Mozilla ရဲ့ Firefox Web Browser က ဒီလထဲမှာပဲ ၅ နှစ်ပြည့်ပါတယ်။ ဒီ browser က လက်ရှိအချိန်မှာ market share လဲ တော်တော်များများရထားတဲ့ အပြင် developers အများစုရဲ့ လက်ဆွဲ browser ဖြစ်နေပါပြီ။ နောက် Web Standards တွေ လိုက်နာတဲ့ အပြင် HTML 5, CSS3တို့လို draft တွေပါ အမြဲ support လုပ်ပေးနဲ့ browser တစ်ခုပါ။
Birthday, Firefox	Continue Reading
Open Web Tools Directory ~ Mozilla Labs
On July 7, 2009	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Tools, Web 2.0	Mozilla Labs ကနေ ဒီနေ့ Open Web Tools ဆိုတာကုို စပြီး launch (Labs) လုပ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Open ဆုိုတော့ အလကားရမယ် လေ့လာလို့ ရမယ်ဆုိုပြီး ၀မ်းသာအားရ ပြေးကြည့်ပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်က မကောင်းတော့ Refresh5ခါလောက်နဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက် စောင့်လိုက်မှ မြင်ရပါတော့တယ်။ Open Web Tools ဆိုတဲ့ အတိုင်း powerful open source web based/ web technologies တွေကို စုစည်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Firefox, Tools	Continue Reading
Mozilla Firefox Add Ons Collections
On June 10, 2009	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Firefox	Mozilla ကနေ Firefox အတွက် Add Ons Collections Packs တွေကို စပြီး လုပ်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Add-On တွေ အမျိုး အစားလိုက်ပြီး တွဲ ပေးထားတာပါ။ Web Developer’s Toolbox, Family Pack, Traveller’s Pack စသဖြင့် လိုက်ဖက်တဲ့ Add on တွေတွဲ ပေးထားတာပါ။ Firefox	Continue Reading
On September 14, 2008	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Download	လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်မှာ သတင်းဖတ်နေရင်းနဲ့ ဘေးက Firefox ကြော်ငြာလေး မိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ယူ ထားလိုက်တာလေး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကြော်ငြာက ရီရတယ် ကာတွန်းလေး တွေနဲ့ သရုပ်ဖော် ထားတာ.. flash animation မိုက်တယ်ဗျ။ အိုင်ဒီယာက ပိုမိုက်တယ်။ အောက်မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ဖို့လဲ ပေးထားပါတယ်။ ပြန်ကြည့်ချင်ရင်တော့ right click မှာ rewind (play) ပြန်လုပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ…
Firefox, funny	Continue Reading
Firefox, Web	Mozilla Firefox’s SUMO Day!!
On April 9, 2008	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Firefox, News	The Firefox Support team (support.mozilla.com, or SUMO for short) would like to invite you to our first SUMO day! This Friday, starting at7AM PDT, we’ll be hostingaday all about getting to know SUMO and learning how to use our site to help other Firefox users enjoy their favorite browser.
If you haven’t already, this isagreat opportunity for you to get involved with Mozilla, regardless of your interests or expertise. We need people to write articles, create screenshots, correct spelling and grammar, answer people’s questions in the forum, or interact directly with Firefox users in live chat — just to nameafew of the many ways you could help us out. Even if you’re just curious to learn more about the project and don’t really plan on participating, we’d be really excited to have you joining us on Friday.
Of course, we’d be even more thrilled if you stayed with us throughout the Firefox3launch, which is going to be an exciting event for the SUMO project. Havealook at the SUMO Day home page for more information and please pop by on Friday!
When:Friday, April 11th7 AM –6PM PDT16:00 – 03:00 CEST
Where:#sumo on irc.mozilla.org
Mozilla Firefox, Firefox, SUMO Day, Mozilla Support Team, Mozilla IRC Server
Firefox	Personas For Firefox
On December 31, 2007	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- News, technology	Mozilla Labs ကနေ Personas For Firefox ဆိုတဲ့ extension အသစ်ကို ယူဇာတွေအတွက် ဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ဒီ Personass က prototype တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အခြေခံထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က –
* themes today are too hard to find, install and use * graphic designers should be able to style the browser without having to code * browsers can be more than just desktop software, they can include online components * people just want their computer to bealittle more fun and personal
ဒီ က themes design (Lightweight Theme) extension တစ်ခုပါ။ သူက Firefox အတွက် themes တွေကို အရင်လို Mozilla Themes ကို သွားရှာစရာမလိုပဲနဲ့ browser windows ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့် အောက်နားက မြေခွေးပုံ ခေါင်းလေးကို နှိပ်ပြီး နှစ်သက်ရာ theme ကို remote resources ကနေ ယူပေးမှာပါ။ ဒီလို theme ပြောင်းတဲ့ အတွက်အရင်လို restart လုပ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ပြောင်းလိုက်တဲ့ theme ကို ချက်ချင်း ပြောင်းပေးမှာပါ။ ပေါ့လည်းပေါ့ပါတယ်။ ဒီ theme design တွေကို မထည့်ချင်တော့ရင်လည်း လွယ်ကူစွာ ပြန်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက် သင်ကိုယ်တိုင်လည်း theme design ကို coding ကျွမ်းကျင်စရာမလိုပဲ design ဆွဲတတ်ရုံနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်နိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်သုံးကြည့်တော့ တကယ်ပေါ့ပြီး theme ပြောင်းရင်လည်း ချက်ခြင်းပြောင်းပေးနိုင်အောင် ပေါ့ပါးတဲ့ extension ပါပဲ။ theme ပြောင်းတာက Online မှာပဲရမှာပါ။ Offline သုံးရင်တော့ theme design တွေ ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ကျွန်တော် နမူနာပြထားတာက Snow Flake ဒီဇိုင်းပါ။ Browser icons တွေကတော့ နဂိုဆို
Firefox	Recent Posts